Location: musha » Kutumira » Nhau dzeWaya » Iyo Inotevera Itsva Charcuterie Board: Tora Mabhanana Ako!
Flavour & The Menu's yegore negore Top 10 Trends inonongedzera ku "demokrasi yekuvandudza," apo mamwe maitiro eresitorendi ave kukurudzirwa nemaitiro evatengi.
Headturning charcuterie boards, inventive bhanana-yakapinza zvinwiwa uye madhiri, uye mitsva mitsva paMexican comfort classics ndevamwe gumi vanofurira kutyaira menyu mafambiro a10, inofanotaura Flavour & The Menu magazini mune ichangobva kuburitswa Yepamusoro gumi Trends edition, online pa getflavor.com .
Gore rega rega, Flavour & The Menu vapepeti Cathy Nash Holley naKatie Ayoub vanogadzira seti yemaitiro anozoenderana nevatengi vemazuva ano uye nekupa mikana yekukura kweindasitiri yekudyira. Vanosimbisa mafambisirwo ezvinonaka ari kubuda, achipa nzwisiso inojekesa "nei" kuseri kwechimwe nechimwe chegumi. Ichi chinyorwa chechiratidzo chinoshanda segwara renzira yekuvandudza, kupa vanogadzira menyu mazano ekushandisa mumusika.
“Muunganidzwa weTop 10 Trends wegore rino unoratidza shanduko, apo vatengi vadiki vanenge vari pachigaro chemutyairi kana zvasvika pakukurudzira kwechikafu nechinwiwa,” anodaro Cathy Nash Holley, Flavour & The Menu’s Publisher/Editor-in-Chief. “Tsvakiridzo yedu yakaratidza kuti social media yasvika padanho rekuti maresitorendi ave kukurudzirwa nehunhu hwevatengi. Uku ndiko kudzoka kwemakore mashoma apfuura, apo vashandisi vakabatana nemaresitorendi pakuedza kwavo kuvaka rudzi. Zvakawanda zvemafambisirwo akafukidzwa munyaya ino anodzokera kumashure ehunyanzvi hwevashandisi vesocial media uye pesvedzero huru. "
Katie Ayoub, maneja mupepeti, anotsanangura chiitiko ichi se "democratization yekuvandudza." “Nhasi nhepfenyuro dzine mukurumbira dzesocial media dzinogonesa uye dzinokurudzira vatengi vadiki kuti varatidze hunyanzvi hwavo uye chido chekudya nezvinwiwa. Aya mafaro ekugadzira-pamba-senge macharcuterie mabhodhi, chingwa chebhanana uye homwe-peta quesadillas - anobata moto nekukurumidza munzvimbo ino, achiwana kukurumidza uye kuvaka chishuwo chekuwedzera kudzokororwa. Vabiki, vabiki vepastry uye vanosanganisa vanogona kusimuka kubva ipapo, vachisimudzira iyo nyowani pop tsika vibe, vobva vatora maflavour aya nemafomu nenzira itsva, dzinonakidza pamamenu avo, "anodaro Ayoub.
Flavour & The Menu's Top 10 Trends ye2022:
1. Next-Level Charcuterie: Energized by social media, charcuterie boards akatanga kudzoka kwavo sekupedzisira kugovaniswa.
2. Spanish Bocadillos: Spain's simple, rustic bocadillo iri kuwana imba pamamenu ekuAmerica.
3. ChiGiriki chemazuva ano: Eschewing the kitschy "Americanized" Greek inotsanangura chikafu kubva kuzvizvarwa, maresitorendi ari kuseta zvakare dial nemabikirwo echokwadi uye zvigadzirwa.
4. Tropical Flavors: Nemavara anosimudzira manzwiro, zvinhu zvinonwisa mvura uye kunzwa kwekupukunyuka pachitsuwa, kunaka kwenzvimbo dzinopisa zvinopa kutiza uye mufaro.
5. Mexican Comfort: Inotevera-level tweaks yezvinoshuva-zvinokodzera ndiro sequesadillas, taquitos uye birria zvinopa rwendo rwakachengetedzeka rwakaputirwa murunyararo rwemumba.
6. Kudyara-Kune Zvokudya Zvokudya Zvokudya: Zvokudya zvegungwa zvakadyarwa zviri kutanga kuita masaisai pamamenu, sezvo vatengesi vane hutsva vanounza zvimwe zvigadzirwa kune chikafu chekudya.
7. Munyu: Munyu uri kuwedzera kukwezvwa sezvose zviri zviviri zvinonhuwirira uye kunaka kwepamusoro-soro pachako.
8. Mapai Emaoko Anonaka: Mafungiro anoshanda nemapai emaoko akamutsiridza mainjini ekuvandudza maempanadas, mapee enyama, mapasties, puffs nezvimwe.
9. Mabhanana: Vagadziri vemenu vanokwanisa kupenengura mitsetse inobvira inowanikwa mubhanana rakapfava: kuridza manzwi aro ekupisa, vachizendamira kunyaradza kwaro Kumaodzanyemba kana kuongorora eclectic mash-ups.
10. Cold-Coffee Drinks: Vatengi vadiki vari kutyaira hunyanzvi muzvinwiwa zvinotonhora-kofi, kutyaira menyu innovation mune yakafara dhairekitori yemaapplication, kubva kutsva isiri-alc kofi tonic kusvika kune yakafara kushandiswa mumakorokoro.